၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ နည်းပညာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ အပေါ် တယ်လီနော၏ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်: လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အားလျော့လာမှုနှင့် မှတ်ဉာဏ်တုတို့၏ နှစ်ဖြစ်လာမည်လော | Telenor Myanmar
23 January, 2017 - Yangon
၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် မှတ်ဉာဏ်တု၊ Internet of Things – IoT (အင်တာနက် အခြေခံ အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်စေ သည့်စနစ် အခြေပြု နိစ္စဓူ၀သုံး ပစ္စည်း/လုပ်ငန်းဆောင်တာများ)၊ chatbot များ (အလိုအလျောက် စကားပြောဆို ဖြေကြားပေးနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသော စနစ်) များသည် ရေပန်းစားလာနိုင်သည်။ တယ်လီနောလုပ်ငန်းစု၏ သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဌာနမှနေ၍ ရှေ့လာမည့်နှစ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အဓိက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နည်းပညာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများအား ယနေ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆက်လက် အားကောင်းစွာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု တယ်လီနော၏ သုတေသန လုပ်ငန်းများမှ မှတ်ယူထားသော များစွာသော အကြောင်းအရာ များ၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းများ ပိုမိုအားကောင်းရင့်ကျက်လာပြီး စမ်းသပ်အသုံးပြုလာနိုင်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည့်အတွက် ကျွနုပ်တို့၏ နေ့စဉ်လူနေထိုင်မှုဘဝများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် လေ့လာဆောင်ရွက်ချက်များသည် ယခုအချိန်တွင် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီ ဖြစ်သည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်း စတင်ဖြစ်ပေါ်လာမှုတွေကို ထောက်ပြခဲ့ပြီး ဒီနှစ်အတွင်း အဲဒီကိစ္စရပ်တွေဟာ ပိုမိုအားကောင်းလာမှာဖြစ်ပြီး လူထုရဲ့ သတိပြုမှုကိုလည်း ပိုမိုရရှိလာမှာ ဖြစ်တယ် လို့ ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ IoT ကလည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်ရဲ့ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်စာရင်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအနေနဲ့ ပိုမိုအားလျော့လာဖို့လည်း ရှိနေပြီး chatbots တွေ ပိုမိုအားကောင်းလာဖို့ ရှိနေပါတယ်။ နောက်ပြီး 5G နည်းပညာကို စတင်စမ်းသပ်လာမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီနည်းပညာအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်တွေ အဆင်သင့် မဖြစ်ခင်မှာ စတင်စမ်းသပ်သုံးစွဲမှုတွေ ရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မှတ်ဉာဏ်တုနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ကျင့်ဝတ် စောင့်ထိန်းမှုတွေဟာ ရေပန်းစားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်” ဟု Head of Telenor Research ဖြစ်သူ Bjørn Taale Sandberg ကပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများအား သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်များမှ တယ်လီနော၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှနေ၍ စမ်းသပ်လေ့လာမှုများ၊ ဒီဇိုင်းပုံစံများ နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်ထားသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများမှ ရရှိသော အချက် အလက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဖော်ထုတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တယ်လီနော၏ သုတေသနပြုလုပ်ချက်မှနေ၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အရှိနိုင်ဆုံး အဖြစ် ယုံကြည် ထားသော အရေးအကြီးဆုံး ရေပန်းစားမှုနယ်ပယ် ၅ ခုကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ
မှတ်ဉာဏ်တု နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များအား စောင့်ထိန်းခြင်း (Keeping AI ethical)
မှတ်ဉာဏ်တုနည်းပညာ အသုံးပြုထားသော အက်ပလီကေးရှင်း အရေအတွက်များမှာ ပိုမိုများပြားလာနေပြီ ဖြစ်သည်။ မကြာမီအချိန်အတွင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်၊ လိုလားချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ပြုလုပ် ထားခြင်းမရှိသော၊ အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုရာတွင် ကိစ္စရပ် တစ်ခုချင်းစီအား ထည့်သွင်း စဉ်းစား ပြုလုပ် သော“ပျင်းစရာကောင်းသည့်” ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများအား စိတ်ကူးကြည့်ရန်ပင် ခဲယဉ်းလာမည် ဖြစ်သည်။ ယခု လက်ရှိတွင် မှတ်ဉာဏ်တုစနစ်များအနေနှင့် အဘယ်ကြောင့် အကြံပေးချက်များ ပြုလုပ်နေသည် ဆိုသည့် အချက်အား ရှင်းပြရန် ခက်ခဲနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ မှတ်ဉာဏ်တု နည်းပညာအား ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာနှင့် အသုံးပြုသူ၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာများကို မပေါက်ကြားအောင် အသုံးပြုနိုင်ရန်မှာ အဆိုပါ နည်းပညာအား ပိုမိုတိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ရာတွင် အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာများ အားလျော့ခါနီးပြီလော ? (On the verge of social media fatigue?)
Flight mode: On. ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာသော သတင်းများနှင့် အပေါ်ယံတွင်သာ ကောင်းမွန်မှုများ လွှမ်းခြုံထားသည့် “သူငယ်ချင်းများ” ပိုမိုများပြားလာသည့်အတွက် မည်သည့်အခါမှ ပြီးဆုံးမည် မဟုတ်သော လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှနေ၍ ခေတ္တအနားယူမည့် အလားအလာရှိနေသည့်အပြင် သုံးစွဲမှုများအား ရပ်တန့်မှုများလည်း ယနေ့ခေတ်တွင် ပိုမိုများပြားလာနိုင်သည်။
IoT နည်းပညာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာခြင်း (All rise for IoT)
၂၀၁၇ ခုနှစ်သည် IoT ဝန်ဆောင်မှုများအား ပေးအပ်နိုင်သည့် လမ်းကြောင်းများနှင့် ကိုယ်တိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော အာရုံခံကိရိယာဆိုင်ရာ နည်းပညာများမှစ၍ အခြေခံကျကျ ဆန်းသစ်သော စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မော်ဒယ်များအထိ IoT ၏ ဂေဟစနစ်အတွင်းမှ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏ အထင်ကရ အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နည်းပညာ သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ သုံးစွဲသူများနှင့် နိုင်ငံအစိုးရတို့ကြား ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ နိုင်ငံအတွင်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အထွေထွေလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် စိုက်ပျိုးရေးစသည့် ကဏ္ဍ အသီးသီး တွင် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများအား ပြောင်းလဲပုံသွင်းသွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
• ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် IoT အတွက် သုံးစွဲမှုများသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၃၇ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ရာမှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၂၉ ထရီလီယံ အထိရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး အာရှ/ ပစိဖိတ် ဒေသ (ဂျပန်နိုင်ငံ မပါဝင်) (APeJ) သည် IoT အတွက် ငွေကြေးအများဆုံးသုံးစွဲသော ဒေသဖြစ်လာ မည် ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏နောက်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဥရောပနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့က ရပ်တည်နေမည် ဖြစ်သည် ဟုလည်း ခန့်မှန်းထားသည်။
Chatbot နှင့် သုံးစွဲသူများ သည် အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများ ဖြစ်လာကြမည် (Chatbots + customers = BFFs)
ယခုနှစ်တွင် သင်သတိမထားမိဘဲနှင့် စက်ရုပ်ဖြင့် စကားပြောမိလျှင် ပြောမိလိမ့်မည်။၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ပိုမို၍ အဓိပ္ပာယ် ရှိသော စကားပြောဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်သည့် ကွန်ပြုတာ ပရိုဂရမ်များဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်များကို ပိုမိုဆောင်ရွက် လာမည်ကို မြင်တွေ့ရမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ Chatbots - သို့မဟုတ် - မှတ်ဉာဏ်တုနည်းပညာ ဖြင့် လူသားများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း - သည် အွန်လိုင်းစားသုံးသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် ပိုမိုများပြားသွား အသုံးပြုလာမည် ဖြစ်သည်။
• စာတိုပို့စနစ် အနည်းငယ်သည် ကမာ္ဘ့ဈေးကွက်ကို တချိန်တွင် လွှမ်းခြုံသွားမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်သည့် အနေဖြင့် စာတိုပို့ app တစ်ခုဖြစ်သော LINE မှ မှတ်ဉာဏ်တုနည်းပညာ နှင့် chatbot များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည့် အစီအစဉ်များကို မကြာမီက ကြေငြာခဲ့သည်။
5G မျိုးဆက် စမ်းသပ်ချက် (5G: Testing 1,2,3 …)
၂၀၁၇ ခုနှစ်သည် စမ်းသပ်မှုနှစ် တစ်နှစ်ဖြစ်မည် - 5G စမ်းသပ်မှုများ ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် ထိုစမ်းသပ်မှုများစွာ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး 5G အား စီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန် ရှေ့ပြေးခြေလှမ်း အနေဖြင့် အားလုံးမှ 5G နည်းပညာကို စမ်းသပ်သွားမည် ဟု ပြောဆိုနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့သည် နည်းပညာ စွမ်းဆောင်ရည်ဘက်သို့ အာရုံစိုက်သွား မည် ဖြစ်ပြီး အခြားသူများသည် 5G စနစ်မှ ပေးအပ်လာမည့် ကွန်ရက် ဂေဟစနစ်နှင့် ဈေးကွက်သစ် အခွင့်အလမ်းများ အတွက် နည်းပညာလိုအပ်ချက် ရှုထောင့်ပိုင်းကို အာရုံစိုက် စမ်းသပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
• အာရှပစိဖိတ်ဒေသသည် 5G အသုံးပြု ဒုတိယအမြန်ဆုံး ကြီးထွားလာမည့် ဒေသဖြစ်ပြီး ၂၀၂၂ တွင် အသုံးပြု သူအားလုံး၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် 5G ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်နယ်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် 5G ကို စီးပွားဖြစ် စတင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု မကြာသေးခင်က ကြေငြာထားသည်။
“ဒီ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေကနေပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းမှာ အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ နည်းပညာ ဆန်းသစ်မှု အချို့ကို ပေးအပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မှတ်ဉာဏ်တုနည်းပညာ၊ IoT၊ 5G နဲ့ အခြား သော ဧရိယာတွေမှာ အရေးပါတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို မျက်မြင်ကြုံတွေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး လူငယ်လူရွယ်တွေအနေနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ အသုံးပြုခြင်းတွေ အားလျော့လာတာကိုလည်း ယနေ့ခေတ်မှာ ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒါတွေ အားလုံးရဲ့ အခြေခံကတော့ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ နည်းဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေကို အလေးထားဖို့ပဲ ဖြစ်ပြီး အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေဆဲ ဒစ်ဂျစ်တယ် လူနေထိုင်မှုဘဝတွေမှာ အထက်ပါ နည်းပညာသစ်တွေကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့ စမ်းသပ်ရာမှာ အားလုံးထက် ပိုမို အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။” ဟု Sandberg မှပြောကြားခဲ့သည်။